Luis Castañeda. Kubvunzana ne2020 Amazon Literary Award Winner | Zvazvino Zvinyorwa
Mifananidzo. Luis Castañeda, Facebook nhoroondo.
Luis Castaneda, Canarian munyori we La Palma, yaive iyo anokunda iyo Amazon Storyteller Literary Award yevanyori muSpanish ye 2020 game Kana mambo auya. Akandipa izvi indavhiyu Ndinokutendai zvikuru nenguva yenyu uye mutsa. Mariri anotiudza nezverinovhuru, mamwe mabhuku avanofarira, vanyori uye mhando, zvaanovavarira, tsika uye zvemitambo zvemunyori uye zvirongwa zvitsva zvaari kufunga.
Kubvunzana naLuis Castañeda
Yake yekutanga novel Kana mambo auya yakasarudzwa kubva pane kupfuura 5.500 mazita, kubva kunyika makumi mashanu, kuzvishambadza Kubudikidza ne Kindle Direct Publishing chikuva pakati paMay 1 naAugust 31, 2020. Basa iri rakavakirwa pakushanya kwakaitwa naMambo Alfonso XIII kuchitsuwa cheLa Palma muna 1906.
LUIS CASTAÑEDA: Handina chokwadi kuti ndidzo nyaya dzekutanga dzandakaverenga nekunyora, asi ndidzo dzekutanga dzandinoziva. Bhuku rekutanga sekudaro raive Nyika ye fursyaJuly Verne, iyo yakabata pfungwa yangu yepamberi pekuyaruka uye yakatangira mimwe yakati wandei nemunyori mukuru wechiFrench.
Kana ari nyaya yekutanga izvo zvandinoyeuka kunyora kwaizofanira kureva, kare semukomana wechikoro chepamusoro, kune irreverent rondedzero titled Luisses papasi revakadzi, uyo aida kuwedzera rumwe ruvara uye kuseka kune iyo magazini fotokopi yatinoedza kuburitsa mu Institute. Yakanga isina kubudirira zvakanyanya.
LC: Ini ndinofunga ndamisa nhanho nhatu semuverengi izvo zvinoreva mabhuku maviri akaita kundibata kwakadzika pandiri nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Iyo kutanga, kubva panguva yangu yekurwa zvakanyanya, yaive Murume, nemunyori weItaly uye mutori wenhau oriana fallaci, yakashata, ine chisimba, ine shungu nyaya, yakanyorwa mumunhu wechipiri, nezve hupenyu hwaAlekos Panagoulis, gamba rekare rakaedza roga kupedza izvo zvinonzi Udzvanyiriri hwevaKoloni. Akasimuka mukurumbira wepasirese mushure mekuyedza kurwisa mudzvanyiriri Georgios Papadopoulos, musi waAugust 13, 1968, kuiswa kwake mutirongo nekushungurudzwa uye, gare gare, kufa kwake mumamiriro ezvinhu kuchiri kujeka.
El yechipiri Bhuku randinoda kudoma nderenguva yangu yekufungidzira, iwo makore ehurombo uye nhamo semudzidzi wenhau muMadrid akandipfuura, ndakakomberedzwa nezviuru zviso zvakauya ndokuenda muhupenyu hwavo, mutorwa kune wangu, asingakwanise kuona « zvishoma zvishoma izvo zvandakanga ndapenda mupendi yangu », sezvakaitika kuna Juan Pablo Castel mukati Tunnelrakanyorwa naErnesto Mugovera, kusvikira awana María Iribarne.
El chetatu Ini ndanga ndatogamuchira bhuku iri mukukura kwangu, nerunyararo rukuru rwemweya, uye iyo yandinoona seyekupedzisira chinongedzo mune manera ekuverengwa mukati meiyo Latin America yekunyora maitiro. Chaizvoizvo, ini ndinogona kunge ndakasarudza chero imwe zita kubva Garcia Marquezasi zvakandizadza zvizere Rudo Munguva YeKirarera, yazvo, nenzira, handisati ndapedza kuiverenga, nekuti nguva nenguva ndinodzokera kwairi ndichikurudzirwa nekumwe kusahadzika, mumwe mubvunzo, vamwe vanoshuva.
AL: Ndiani munyori waunofarira?
LC: Uyu mubvunzo, mune dzino nguva dzehupenyu hwangu, une mhinduro iri nyore, nekuti pasina kupokana ndinofanira kusarudza iyo Colombian Mubayiro weNobel. Vamwe vanyori vandaigona kunongedzerawo pano –Juan Rulf, Faulkner, muvezi, etc.- Ivo vanogara vachinditungamira, semhedzisiro, kuna García Márquez. Uye hazvisi izvo kuti ini ndiri muverengi akanaka, nekuti Ndinotadza kuverenga zvakawandisa uye ndinozviona zvakaoma kuvhura kune mamwe masitaera. Pandaive mudiki, ini ndakaverenga bhuku rechokwadi, kunyanya iro nyowani nyowani yeAmerica saTom Wolfe, Norman mailer, Truman KapoteZvese kubva kune venhau venyika, asi havana kuzadzisa zvakakwana mweya wangu wekurota.
LC: Ini ndakanga ndisati ndambofunga nezve izvi, asi ini ndaizokuudza kuti ndingadai ndaifarira kugadzira uye kugara pamwe chete nevanozvivaraidza mavara, senge Phileas fogg de Pasi Pasi Pose mumazuva makumi masere kana the mufambi de Iyo nguva Muchina, naHG Wells, kupukunyuka maMorlocks, kana Axel kuburukira ku Nzvimbo yePasi.
AL: Chero mania kana tsika kana zvasvika pakunyora kana kuverenga?
LC: Pandinonyora Ndinoda kundiperekedza nemumhanzi (chishandiso, zvikasadaro chinondisimbisa) uye, zvirinani kwegore rese randanga ndichinyora Kana mambo auya, ivo pfuti yedoro remedarari kudhonzwa naamai vangu. Ipapo zvinodikanwa kuve neiyo gonhi rakavharwa, kurasa nguva kumberi (ini handikwanise kutanga kunyora ndichiziva kuti muhafu yeawa ndichafanira kuisiya kuti ndiite kuzvipira) uye, pakupedzisira, kuda kuziva: Ndinofanira kuva nezvipikiri zvipfupi, zvakanaka roja, izvo zvinogona kubata makiyi nemapedhi.
LC: Iyo when is chimwe chinhu chandisingatombo sarudza, asi pane kuteerera paanondisiya hupenyu hwake hwese. Ini ndinoedza kuwana kugadzikana, asi sekuzvimiririra zvandiri, inowanzo chimera. Zvisinei, kutanga kunyora kunowanzoitika nguva pfupi mushure memasere masikati kusvika nguva dzinenge gumi. Uye ini handisarudze kupi, kana kuifungira. ndine hofisi diki, ndakagovana nemukadzi wangu, kwandinayo komputa, mabhuku, mikombe yechess, zvimwe zvinhu zvangu ... Ini ndinongofanirwa kutsvaga nzira yekudzinga mukadzi wangu kuti ndiwane kusurukirwa kusurukirwa.
AL: Nhoroondo yako inotiudzei Kana mambo auya?
LC: Iyi nhoroondo inotaurira nezvazvo kusurukirwa uye tariro, rudo uye kurwadziwa pamoyo, ruvengo negodo, hwehupenyu nerufu; inyaya yemanzwiro epasirese akanangidzirwa mudombo diki regomo rinopoteredzwa negungwa. Kana mambo auya, irwo rwuri musoro werudo nerufu pachitsuwa chakapoteredzwa, iri nhoroondo yekunyepedzera, kana mamiriro ezvinhu enhoroondo, anotiudza hupenyu uye kutenderera kwevagari vechitsuwa chakakanganikwa wakamirira chii, izvo zvavanoshuvira, kusvika kwamambo wehumambo kuzovanunura, uvaponese kubva kune ese matambudziko. Uye sei, zvakadaro, ramangwana uye nezviito zvavo pachavo vanopedzisira vachinja musangano iwoyo, uyo waifanira kuve wenhoroondo, kwete kungova kutanga kwehupenyu hutsva, asi kumagumo ane mbiri emutambo unovatambudza.
Nekuchengeta kwese kuri munyika, vanogadzirira guta diki rekugashira, kunyangwe nenjodzi nezvose zvavanotambura, asi, sekunge kwaive kutukwa, kuve kuri kupa zvipingaidzo izvo zvinogona kukanganisa kusangana kwaunoda, senge izvo zvinoitika papeji rekutanga: iyo chitarisiko chemuviri usina hupenyu, kubayiwa uye kuyangarara mugungwa, yechiremba anoyevedza Mauricio Santos open.
Kubva pano zvichienda mberi, a kwaya inoverengeka izvo zvinoratidza izvo vatambi vanobatanidzwa uye nehukama hwavo, uye mune irwo rudo - rwakarambidzwa, rwakashatirwa uye nerusingafarirwe - runotamba chinzvimbo chekusarudza.
LC: Zvangu zvinyorwa zvinyorwa, semuverengi vanga vachichinja pamusoro pemakore. Munguva pfupi kukoshesa kwangu kwe nhoroondo uye, kazhinji, ne nhoroondo yenhau. Zvinoita sekunge, pandakachinja zuva rangu rekuzvarwa, ndakatorwa moyo nenyaya dzekare uye zvekare mafirimu ekare.
LC: Izvozvi ndiri kupedzisa kuverenga kweinoshamisa biography pamusoro pehama dzekwake, nhoroondo yenyaya-ngano yeMadrid, yakatemwa kuCzech uye, senoverengeka, ndinotevera kwechinguva nekuverenga kwe Ndine mandiri zviroto zvese zvepasi, basa rinokosha re Jorge Diaz.
Kana zvakadaro kunyora kwakanyanya, sezvo panguva dzino handisi kuburitsa. Ndiri mukuita kuenderana, kunzwa uye kufambiswa nenhoroondo inotambudzika kutora chimiro. Ini ndinonyora pasi zvirevo, mazano, manzwiro. Ini ndoda kuzadza chipfuva changu nepfungwa dzangu nemanzwi evatambi ndisati ndaendesa nyaya. Tichaona zvinobuda.
LC: Kubva pakuvharirwa, uye mugore rese rapfuura, ndanga ndichinyorera a nzira yekunzvenga ini chokwadi chave chakandishandira pamwe nedziviriro yepfungwa, uye anga asiri mumwe asi tarisa pabasa. Ini ndakatanga nekubata kumashure kumashure ndobva ndaenderera kumaprojects andingadai ndisina kuwana nguva kana simba rekuita neimwe nzira. Ndakashanda zvakanyanya, zuva nezuva, mukati memwedzi iyoyo yekumira kana semi-kumira mukambani yangu, kwandinogara uye kwandinoita basa rangu nehupenyu hupenyu.
Asi ndaitotadza kunyora munguva iyoyo. Iko kusava nechokwadi hakuna kundipa rugare runodiwa rwepfungwa nezvazvo. Zvinonakidza, asi ndozvazvaive. Zvino, negore idzva uye mushure memazuva mashoma ekufungisisa, ndiri kutsvaga nzira yangu zvekare. Uye, o, kushamisika: zvinoshamisa kuti mugwagwa unopfuura nemubasa. Iri ibasa rezuva nezuva iro rinondipa rugare rwekugadzira. Ndiri pairi. Ndine tariro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Luis Castañeda. Kubvunzana ne2020 Amazon Literary Award Winner
Mabhuku epamusoro epfungwa